Farmaajo ma fuliyay ballanqaadyadii uu sameeyay? – Kalfadhi
February 8, 2021 Hassan Istiila
Maanta ayay ku egtahay muddo xileedka dastuuriga ah ee afarta Sanno ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamad Cabdillaahi Maxamad Farmaajo oo xilka loo dhaariyay 8-dii Febraayo 2017 kadib doorasho uu kaga guuleystay madaxweynihii isaga xafiiska uga horeeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud.
Gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare abukaate Caydiid Cabdillaahi Ilkaxanaf ayaa ku sheegay sababta horey loogu wadi la’yahay dastuurka inay tahay isbarbaryaac.
“Arimaha Dastuurka ee Soomaalida gabigeedaba sida loo wado si wanaagsan ma aha si khalad ah ayaa loo wadaa, arimahan waxa la doonayaa in loo daayo guddiga caddaalada, guddiga caddaalada ayaa ah guddigii distoorka, guddigaasi si loo wado hadda ma aha si madaxbannaan, waxa la isku darayaa guddigii distoorka ee madabannaanaa, guddigii distoorka ee Barlamaanka, guddigii distoorka ee Aqalka Sare maxaa gadhka isu galiyay waxan ayuu is waydiiyay Avv. Caydiid Ilka Xanaf.”
Gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ayaa rumeysan in marka hore loo madaxbannaaneeyo guddiga si ay distoorka uga shaqeeyaan .
“Marka hore waxa la doonayaa in guddigaa loo daayo, guddigaa madaxabannaan marka ay soo dhameeyso dawladday u keenaysaa oo wasiirkan distoorka iyo dawladda ayay u keenaysaa, dawladda eegeysa, markaas ayay dawladduna u gudbinaysaa Barlamaanka, guddiyadan Barlamaanka ee iminka halka hore ka bilaabaya maaha ee halkaas ayaa loogu gudbinayaa, kadibna haddii uu hagaagsanaado shacabka ayaa loo gudbinayaa”.
Maanta ayuu dhamaanayaa xilka madaxweynaha dawladda federaalka, iyadoo waqtigii barlamaankuna dhamaaday 27 December walina ma muuqato heshiis wadar ogol ah oo lagu galayo doorasho maalamaha inagu soo fool leh. BBC Soomaaliya ayaa warbixinta markii hore lagu daabacay.
“Waa cambaar kale oo abid ku summadeysnaan doonta taariikhda dalkeenna”